NEW STARTERS | portersgrange
Nursery & Reception vatangi vatsva 2021/22
Kugamuchirwa kunharaunda yedu yechikoro. Isu tinonzwisisa kuti iwe unenge uchizoda kuziva zvese nezvechikoro chitsva chemwana wako. Iri peji rinokupa iwe ruzivo iwe rwaunoda kuti ubatsire pakuziva mwana wako nerekiresi uye hupenyu hwekugamuchira paPorters Grange Primary School uye Nursery.
Mifananidzo yedu nemavhidhiyo zvinoratidza iwe yakajairwa mutinhimira wezuva redu reEYFS. Nekudaro, izvi zvinogona kutaridzika zvakasiyana kana uchiteedzera gwara rehurumende rekudzokera kuchikoro. Asi isu tinovimba izvi zvinopa mwana wako nzwisiso yezvavaizosangana nazvo mukati mezuva nezuva rechikoro kuchikoro. Tinovimba unogona kutora nguva yekugovana mifananidzo nemavhidhiyo nemwana wako. Iwe ungatofanira kuvatsanangurira kuti zvinogona kunge zvakati siyanei pavanotanga.
Kana iwe uine chero mimwe mibvunzo ndapota nyorera hofisi yedu yechikoro pa office@portersgrange.southend.sch.uk. Tinotarisira kukuona iwe nekukurumidza sezvatingagona.
Kutanga Chikoro paPorters Grange Booklet
Yedu Yemazuva ese Chikoro Maitiro
Yedu EYFS ruzivo
Tsamba dzemuno nzendo
Tsamba yekushandisa yeInternet
Yemahara Chikoro Chikafu fomu rekunyorera
Kutanga Nursery kuPorters Grange Booklet
Nursery yekumirira runyorwa fomu
Porters Grange Nursery inowanikwa kuvana izwi mushure me3rd Birthday yavo. Nursery inoitwa chero Muvhuro kusvika Chishanu 8.45am kusvika 11.45am kana Muvhuro kusvika Chishanu 12.15pm kusvika 3.15pm, term time chete. Isu tiri kukwanisa kutora vana vanokodzera kwemaawa makumi matatu ekubhadharira mari nekufanozivisa uye tinogona zvakare kukurukura kana iwe uchida kubhadhara kwemaawa ekuwedzera.
Ndokumbirawo muzadzise ruzivo runotevera kuitira kuti mwana wako agogona kuiswa pa Nursery Kumirira chinyorwa.
Zuva reMwana rekuzvarwa
Zita rehama muPorters Grange